केश को फूल नै कसरी बनाउने
हरेक महिला कम्तिमा आफ्नो जीवनमा एक पटक, रहनसहन कसरी गर्न, के केश यो वा त्यो गर्न मामला लगाउन के बारेमा प्रश्नहरू सास्ती। यस लेखमा कति सुन्दर कपाल राख्नु आफ्नो शङ्का सामना गर्न मदत गर्नेछ।
केश "बाल को फूल" दैनिक जीवनमा र छुट्टी सान्दर्भिक हुन सक्छ। किनभने कपाल को रंग विकल्पहरू असंख्य पाउन सकिन्छ तपाईं, यो काम गर्न सक्छन्, वा आफ्नै विवाह गर्न। त्यहाँ ऊन संग र पेंट, Foams र gels को प्रयोग संग एक भव्य Hairstyles छ। र त्यहाँ जहाँ तपाईं रबर ब्यान्ड, केही पिन र अदृश्य एक को बस एक जोडी हुन सक्छ, एक भद्र र आकस्मिक छ।
तपाईं छोटो कपाल (को काँध माथि) छन् भने, त्यसपछि यो छैन कि केश "आफ्नो कपाल को फूल," तपाईं प्राप्त छैन दुखी हुन एउटा कारण छ। बुद्धिमानी स्टाइलिस्ट र नाई लामो बरु छोटो कर्ल संग बालिका र महिला लागि यसको विकल्प संग आएका छन्। मुख्य कुरा तिनीहरूले 10-15 सेमी भन्दा छोटो छैन भन्ने छ।
कपाल को बाहिर एक फूल बनाउन, कृपया वार्निश, बाल curlers र अदृश्य हुन। सम्पूर्ण लम्बाइ भन्दा केश ध्यान comb, जहाँ तपाईंले यो केश बनाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो टाउको, एक स्थान चयन गर्नुहोस्। यो एक फूल तपाईं छोटो कपाल छ भने बाल बाहिर पक्ष बाट, भन्दा पछाडि मा, गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। आफ्नो बाल पूर्व-धुन र एक औसत fixation एक फोम लागू हुन्छ। केश अलिकति नम थियो भनेर हेयर ड्रायर ड्राई। बारेमा 3-4 सेमी dosushit hairdryer एक व्यास संग र अर्को 2-3 घण्टा curlers हिंड्न .. - हुन जो गर्नुपर्छ धेरै ठूलो भएको रोलर्स, भाड
पछि उनलाई वोल्ट नट आदि खोल्नु र hairspray नम्र fixation संग छिडकना। एक ponytail मन्दिरमा भेला हुन्छन्। सुरु , स्पाइक बुनाई गर्न यसरी पुच्छर को एक Strand दूर। अर्को, braids को किसिमहरु खींच सुरु, कि बाल टाँसिएको छैन त, धेरै छैन लिन प्रयास गर्नुहोस्, तर कडा पर्याप्त छैन रकम थियो। कि पछि, लाह कपाल उदार छिडकना। मिडवे मा, जहाँ एक दल थियो, तपाईं कपाल मा एक सजावटी फूल संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ। केश थप सुरुचिपूर्ण देख्यो गर्न, मोती बुना हुन वा चमक वार्निश यसलाई छिडकना गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य मा, तपाईं मामला आफ्नो लिङ्कमा र दृष्टिकोण, जो तपाईं तयार गर्न हुने कुनै पनि आभूषण, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै समयमा कपाल को फूल अझै पनि आफ्नो कपाल को मुख्य तत्व हुनेछ।
तपाईं लामो कपाल छ भने, त्यसपछि तपाईं पनि सजिलो नै स्टाइल गर्न, र विकल्पहरू धेरै छन्। तपाईंले यसलाई सिर्जना गर्न टाउको मा कुनै पनि स्थान चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यो टाउको पछाडि होस्। एक ponytail र चुल्ठो plait मा मोड कपाल। यसलाई बाहिर किसिमहरु पुल र गम वरिपरि सबै यो र्याप। सबै अदृश्य, पिन र वार्निश सुरक्षित। यो विकल्प दैनिक Hairstyles "कपाल को फूल।"
त्यहाँ बस अघिल्लो संस्करणमा जस्तै तीन किसिमहरु को क्लासिक चुल्ठो छैन braiding अर्को विकल्प-जस्तो स्टाइल, र "माछा पुच्छर" छ। यो गर्न, दुई बराबर किसिमहरु मा एक ponytail मा बाल विभाजन। तपाईं विपरीत दिशा मा सार्न चाहनुहुन्छ कि एक साना चयन हरेक भाग देखि। त्यसपछि फेरि, braids केही किसिमहरु पुल र पुच्छर लक वरिपरि र्याप। एउटै Hairstyles को यस संस्करणमा एक सानो सुरुचिपूर्ण र भव्य हुनेछ। यस्तो रोचक स्टाइल संग पनि बाल गहने आवश्यक हुन सक्छ। फूल कुनै पनि सहायक राम्रो प्रतियोगिता बनाउन सक्छ।
सुशील बाल रंग (मध्यम बाल लागि)। बाल रंग को नयाँ प्रविधी
Braids spikelets। हरेक महिला फिट हुनेछ केश
नर्सिङ को ABCs। शैम्पू। - आहार पूरक
लामो कपाल लागि द्रुत Hairstyles हरेक दिन सान्दर्भिक छन्
प्रकाश Hairstyles - तिनीहरूले के हुन्?
यो रेपन्जेल: यो केटी 13 वर्ष को लागि उनको कपाल काट्न छैन!
घर मर्मत स्कूल: stripping उपकरण
डिम्बाशय apoplexy: यो के हो? कारण, लक्षण र उपचार तरिका
Pericardial effusion: लक्षण र कारण। निदान र उपचार
परिदृश्य डिजाइन - आफ्नो बगैचा विशेष बनाउन
स्मृति: प्रकार र विशेषताहरु ल्याप्टप
स्कूल मा परिवार मान गठन। आधुनिक परिवार मान
पर्खाल घडीहरु को सही विकल्प
Compliments केटी को सूची। तीन मुख्य सिद्धान्तहरू